ထီ - Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) Apk | ထီ - Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result) Free Android Apps | Apk Download
ထီ – Hti Pauk Sin (Aung Bar Lay Lottery Result)
You can check Aung Bar Lay lottery ticket quickly and conveniently in Myanmar and world wide, which is drawn on the first day of every month.
Hti Pauk Sin app provides the most accurate and fastest lottery result in Myanmar.
It provides only (1000 Tan draw) from draw number 1 to the latest one. It allows you to check multiple lottery tickets atatime.
User will able to check multiple Aung Bar Lay lottery tickets (Htee or Hti) by adding in three different ways in this Hti Pauk Sin app,
1) One lottery tickets by tickets
2) Same alphabet with different numbers (up to 99 lottery tickets atatime)
3) Different alphabet with same number (up to 66 lottery tickets atatime)
In order to fill tickets to check results, choose one of the options from above.
(A) For option (1) choose alphabet “Ka” to “KaAa” then fill in 6-digit numbers.
(B) For option (2) choose alphabet “Ka” to “KaAa” then fill in 4-digit numbers first, then fill in 2-digits “from” and “to” boxes.
(C) For option (3) choose alphabet “Ka” to “KaAa” in “from” and “to” boxes first, then “KaAa” then fill in 6-digit numbers.
Users will able to check as many Aung Bar Lay lottery ticket (Htee or Hti) as they can. Hti Pauk Sin application does not limit how many Aung Bar Lay lottery tickets (Htee or Hti) users enter.
This app is developed and provided independent of the involvement of Myanmar Lottery. To the extent that the reporting of lottery result may be inaccurate, please note that such inaccuracies are not the responsibility of and should not be attributed to Myanmar Lottery.
For more information, please visit https://aung-bar-lay.web.app or follow us on Facebook at https://fb.me/htipauksin
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လစဥ်၁ရက်နေ့ ထွက်သော အောင်ဘာလေ သိန်းဆုမဲများကို ထီပေါက်စဥ် အပ်ပလီကေးရှင်း (ထီပေါက်စဥ်) နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာ တိုက်စစ်လို့ရပါပြီ။
အကြိမ်ရေ (​၁) မှ နောက်ဆုံးအထိထွက်ခဲ့သော အောင်ဘာလေ သိန်းဆုမဲများကို အပ်ပလီကေးရှင်း (ထီပေါက်စဥ်) မှတစ်ဆင့် တိုက်စစ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများ ထီတိုက် မည်ဆိုပါက အပ်ပလီကေးရှင်း အတွင်း၌ နည်းလမ်း (၃) မျိုး ဖြင့်တိုက်စစ်နိုင်ပါသည်။
(က) တစ် စောင်းချင်း ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း
(ခ) အက္ခရာတူ ဂဏန်းမတူ စောင်ရေ ၉၉ အထိ ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း
(ဂ) အက္ခရာမတူ ဂဏန်းတူ (မွှာရှယ်) စောင် ရေ ၆၆ အထိ ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း
ထီလက်မှတ် ထည့်သွင်းရန် တစ်စောင်ချင်း (သို့) အက္ခရာတူ ဂဏန်းမတူ (သို့) အက္ခရာမတူ ဂဏန်းတူ ကို ရွေးချယ်၍ စတင်ပါ။
(က) တစ်စောင်ချင်း ထည့်သွင်းရာတွင် အက္ခရာကို က မှ ကအ အထိ တစ်ခုရွေးချယ် ရပါမည်၊ ပြီးလျှင် ဂဏန်းကို ၆လုံးပြည့်အောင်ရိုက်ထည့်ရပါမည်။
(ခ) အက္ခရာတူဂဏန်းမတူ ထည့်သွင်းရာတွင် အက္ခရာကို က မှ ကအ အထိ တစ်ခုရွေးချယ် ရပါမည်၊ ပြီးလျှင် ဂဏန်းကို ပထမ ၄ လုံးပြည့်အောင်ရိုက်ထည့်ရပါမည်၊ နောက်တွင် ၀၀ မှ ၉၉ မည့်သည့်ဂဏန်းမဆို နှစ်လုံး ထည့်သွင်းလို့ရပါ သည်။
(ဂ) အက္ခရာမတူဂဏန်းတူ (မွှာရှယ်) ထည့်သွင်း အက္ခရာကို က မှ ကအ အထိ နှစ်ခုရွေးချယ် ရပါမည်၊ ပြီးလျှင် ဂဏန်းကို ၆လုံးပြည့်အောင်ရိုက်ထည့်ရပါမည်။
တိုက်စစ်နိုင်သည့် စောင်ရေ ပမာဏကို မကန့်သတ်ထား သောကြောင့် တစ်စောင် မှသည် အုပ်ရေ တစ်ရာ၊ တစ်ထောင်၊ တစ်သောင်း၊ တစ်သိန်းမက ကို စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်း တိကျမှန်ကန်စွာ တိုက်စစ်နိုင်ပါသည်။
ထီတိုက်မယ် ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင် သင့်ရဲ့ထီလက်မှတ်ပေါက်မပေါက်ကိုသိရှိနိုင် ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ https://aung-bar-lay.web.app (သို့မဟုတ်) https://fb.me/htipauksin သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
We're always working hard to optimize our app with the latest technologies and best new features. The version includesanumber of UI/UX improvements as well as stability enhancements. Enjoy!